Prince Charles & Queeen Letizia Gaa na Osisi Eserese Mba - Ozi
Chere… Ndi Prince Charles & Queen Letizia Ha Nwere Aka Nzuzo?
Prince Charles na Queen Letizia nwere akara egwuri egwu nke ụnyaahụ ma (ikekwe) gosipụta nkwanye nzuzo ha. Ọ baghị uru ikwu, ọ bụ nnukwu ụbọchị.
Nwa nwoke nke 70 nke Wales na Queen nke Spain dị afọ 46 jikọtara iji nwee ekele maka ihe ọhụrụ Sorolla: Spanish Master of Light ngosi nke ọrụ omenka Spanish Joaquín Sorolla na National Portrait Gallery ma kelee ibe ha dịka ndị enyi ochie ha bụ.
Ndị eze wee jiri aka ijikọ aka na ngwakọta nke yiri akụkụ nke Ndị nne na nna ọnya okwukwe aka. (O nwere ike ịbụ?!)
Prince Charles bịakwara maka isusu ọnụ enyi na njide aka.
Mgbe ahụ, oge eruola ịmalite njem ha. Onye isi, onye bụ Patron nke National Gallery, nwere obi ụtọ karịa igosi onye ọbịa ya na ngosi ngosi Sorolla mbụ pụtara na United Kingdom.
Queen Letizia yi efe dịka oge ọ bụla maka emume ahụ, na-eyiri uwe mara mma ụbọchị Carolina Herrera nwere aka uwe ya na uwe mwụda dabara adaba. O jikọtara ọnụ na-adabaghị adaba na nchịkọta 2019 tupu oge ọdịda nke Nina Ricci na akwa mmiri satin na-acha anụnụ anụnụ. Onye nta akụkọ ahụ-tụgharịrị-eze nwanyị jiri ọla ntị buru ibu Bvlgari MVSA tinye anya na ọla ntị nke ọ na-eyi na mbụ. Ọ hapụrụ oke ọla ntị ya ka ọ na-enwu site na ịkpụ ntutu ya ka ọ laghachi azụ n'ime obere ponytail na-enweghị atụ na iberibe iberibe gburugburu ya na á la Meghan Markle.
Charles na-elekwa dapper anya, na-eyikwa uwe na-acha anụnụ anụnụ nke nwere azure na isi awọ na-acha odo odo na icheku ọkụ na-acha ọkụ ọkụ (ugbu a nke na-eme ka ike gwụ ya). Ọ dọtara nzukọ ahụ na akpụkpọ ụkwụ ojii na mgbanaka mgbanaka ezinụlọ ya.
Nwanyị Princess Beatrice nke mbụ mere ka ọ hụ ọhụụ ọhụụ ya na enyi ya ọhụụ na National Portrait Gala ma ugbu a ọpụpụ eze a? National Portrait Gallery bụ kpam kpam poppin '.
Gbasara : 8 Times Prince Charles Bụ Nnukwu Royal Wildcard
10 mfe anwansi aghụghọ
Hollywood kacha ihunanya fim
esi ewepu ntutu site na ihu ruo mgbe ebighi ebi
fim kacha mma maka ndị nọ n'afọ iri na ụma
tinyere akwa ogologo uwe ejiji